MM Popular – Page 48 – News And Videos
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆုအိမ်စံနဲ့သူရိယ တို့စုံတွဲလေးဟာ ပရိသတ်တွေ အားကျနေကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက် အပေါ်တစ်ယောက် နားလည်မှု အပြည့်, မလျှော့သော အချစ်တွေနဲ့ လက်တွဲ ခိုင်မြဲခဲ့တာအခုဆိုရင်(၁၁)လမြောက်ချစ်သူသက်တမ်းလေးရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပ်ချင်းလဲ တူတဲ့အပြင်လျောက်လှမ်း နေကြတဲ့အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ် မှာလဲကိုယ်စီ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တွေ ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနတ်ဖတ်တဲ့ဖူးစာရှင်စုံတွဲလေးဟာ လက်ရှိမှာတော့ ဘဝရှေ့ရေး အတွက်ကြိုးစား နေကြတာဖြစ်ပြီး သေချာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်ရင်လက်ထပ်ဖို့အထိရည်ရွှယ်ထား ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်လေးကတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပါပဲ။ဆုအိမ်စံနဲ့သူရိယတို့စုံတွဲလေးကိုခိုးရာလိုက်ကူညီပေးနေတဲ့မြှားနတ်မောင်ကြီးပြေတီဦးကိုပါမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆုအိမ်စံတို့စုံတွဲလေးနဲ့အတူမင်းသားချောပြေတီဦးကိုပါအတူတွဲမြင်တွေ့ရတဲ့ထူးခြားမြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထူးထူးခြားခြားမြင်ကွင်းလေးကတော့မင်းသားချောပြေတီဦးနဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်စုံတွဲလေးရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုခြေလှမ်းအသစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆုအိမ်စံဟာသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာလဲ “မိန်းမလာခိုးတာတဲ့ ညဘက်ကြီး ကူညီပေးသော ကိုတီတီ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်လေးတစ်ချို့ကိုမျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာမင်းသားချောပြေတီဦးကိုဆုအိမ်စံနဲ့သူရိယတို့စုံတွဲလေးရဲ့ခိုးရာလိုက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မြှားနတ်မောင်ကြီးအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာကြည့်ရှုရတော့မယ့်ပရိသတ်အချစ်တော်သုံးယောက်ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်လးတွေကိုလဲပရိသတ်တွေအကြိုခံစားနိုင်စေရန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဆုအိမျစံနဲ့သူရိယ တို့စုံတှဲလေးဟာ ပရိသတျတှေ အားကနြကေရြတဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲလေးပဲဖွဈပါတယျ။ တဈယောကျ …
” ဆေးကျောင်းသား ၂၃ ယောက်ကို ကူညီခဲ့တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်တို့မိသားစု ” . ရွှေနန်းတော် ရတနာဆိုင် ပိုင်ရှင် အမဖြစ်သူလဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် …
သရုပ်ဆောင်လဲတော် အဆိုပညာမှာလည်း ကောင်းမွန်လှတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ကတော့ ပညာရေးအတွက်ကို တတ်နိုင်သလောက် အထောက်အကူပြုလိုက်ပါပြီ ။ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ​​​ဆေး​ကျောင်းသား ၂၃ ​ယောက်​ကို ပညာသင်​စားရိတ်​ ​ထောက်​ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်​ လေးကို မောင်နှမတွေ အလှုရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးအကောင်အထည်ဖော်ပေးလိုက်တာပါ ။ ” ​မေ​မေ ဖြစ်​ချင်​တဲ့ ပညာ​ရေး​ဖောင်​​ဒေးရှင်းအတွက်​ … သားသမီး​တွေ လဲ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်း ကူ​ပေးကြတာပါ … ​​​ဆေး​ကျောင်းသား ၂၃ ​ယောက်​ကို ပညာသင်​စားရိတ်​ ​ထောက်​ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်​ပါ …​မေ​မေ နဲ့ ကျမတို့​မောင်​နှမ​တွေ က ၁၀ ​ယောက်​ ကို တာဝန်​ယူ​ပေးပြီး … ပြည်​တွင်းပြည်​ပ အလှူရှင်​များက ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကြတာပါ …
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 005 တုန်းကလို တလုံးတည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ
ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 005 တုန်းကလို တလုံးတည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 005 တုန်းကလို တလုံးတည်းပြန်ပေးမည် ကွန်မန့်ကို ok လို့ရေးပြီး like and share လုပ်ပြီး မျှပေးပါ ချဲဒိုင်တွေကို အမြင်ကပ်လို့ အခုဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ပေါက်မှပေးတယ်မပြောနဲ့ ဒိုင်မပိတ်ခင် ထိုးကြပါ …. ပေါက်သီး ရပြီ 005 …
” မေသန်းနုရဲ့ အိမ်ခြံဝန်းကို ၀င်ရောက်အကြမ်းဖက်သူ နောက်ဆက်တွဲသတင်း “
ရုပ်ဆောင် မေသန်းနုရဲ့ ခြံကို မာစီဒီးကားနဲ့ တိုက်ဖွင့်ပြီး ခြံအတွင်းရှိ Alphard ကားကို ထုရိုက်ဖျက်ဆီးပြီး နေအိမ်ထဲထိဝင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ညက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ အတော်ပျံနှံနေပါပြီ ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြသလို နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များကိုလည်း ဆက်လက်သိချင်နေကြပါတယ် ။ ကျူးလွန်သူဟာ အသက် ၅၀ ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ် ။ နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ့ အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မေသန်းနုက အမှုဖွင့်တရားစွဲထားပေမယ့် တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မဟာ အာမခံပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဆိုပါ တရားစွဲဆိုခံရသူမှာ အာမခံရရှိသွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ် ။ မေသန်းနုရဲ့ တိုင်တန်းချက်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးလို့တော့ သက်သေများကို …
16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။
16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။ 16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။ 16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။ 16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။ 16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ Likeတစ်ချက်လုပ် ကွန်မန့်မှာ *Ok*လို့ရေးshare။ ပြီးရင်ဝင်ကြည့်ပါ။ 16ရက်နေ့အတွက် သေချာပေါက် 3Dပေါက်ဂဏာန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်စွာထိုးပါ မပေါက်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမတင်တော့ဘူး။ …
ပန်ဆယ်လို အား တရားစွဲပြီဖြစ်ကြောင်း Aung Htut Thet ၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ယခုလိုတင်ထားပါသည်။
MRTV-4 ရဲ့ နာမည်ကြီး အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ခေတ်သစ်ပျိုမေ” ရဲ့ ပင်တိုင် Host တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်းဟာ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားလှပါတယ်။ Presenter လောကမှာ နာမည်တစ်ခုရရှိထားတဲ့ သူမဟာ အနုပညာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသံချိုချို အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံလေးတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေ စောင့်ကြည့်ရတဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ တလောက အင်းဝမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့လှနေတဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ပရိသတ်တွေကြား အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ သဇင်နွယ်ဝင်းနဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူတို့ဟာ ချစ်သူသက်တမ်း အခိုင်အမာတစ်ခုထိတွဲနေကြသူတွေဖြစ်ပြီး အများအားကျရတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Fan page …
မြန်​မာ ကို ကမ္ဘာက အဘယ်ကြောင့် စစ်မတိုက်​ရဲသနည်း စစ်တုရင် မထိုးရဲသနည်း ?
မြန်​မာဆိုတာ စစ်​ဗျူဟာ ကမ္ဘာ​ကျော်​ခဲ့တဲ့သမိုင်းရှိတယ်​….. တစ်​နိူင်​ငံလုံးမှာ ရန်​ကုန်​တစ်​ဝိုက်​သာအာဏာကျ​န်​​တော့တဲ့ အချိန်​ကဆို ရန်​ကုန်​အင်းစိန်​ ဘက်​​တွေထိ KNU​တွေ တိုက်​ခိုက်​ သိမ်းပိုက်​ချိန်​….တပ်​ရင်းအနည်းငယ်​​လေး​လောက်​နဲ့တစ်​နိူင်​ငံလုံးကို ပြန်​လည်​ကယ်​တင်​နိူင်​ခဲ့တာ….. ဒါဟာ စစ်​ဗျူဟာ အရာမှာ ကျွမ်းကျင်​လို့သာ….ရနိူင်​ခဲ့တယ်​ဆိုတာ သက်​​သေပဲ…… ___________________________ ​နောက်​တစ်​ချက်​ မြန်​မာနိူင်​ငံရဲ့ ပထဝီအ​နေအထားကိုကြည့်​ ပြည်​နယ်​တစ်​ခုကို ကျူ​ကျော်​လာရင်​ ပြည်​နယ်​တစ်​ခုက​လေ ထိုးစစ်​ဆင်​တွန်းလှန်​နိူင်​တဲ့ ပြည်​နယ်​အ​နေအထား……အ​ကောင်းဆုံးက မြန်​မာဆိုတာ နှစ်​​ပေါင်းများစွာပြည်​တွင်းစစ်​​ကြောင့်​ စစ်​ရည်​ပြည့်​ဝပီးသားနိူင်​ငံ……ဘယ်​​နေရာကို ဘယ်​လို ထိုးစစ်​ဆင်​ တွန်းလှန်​ရမယ်​သိပီးသား……မြန်​မာနိူင်​ငံသားဆိူတာလဲ က​ဘေးငယ်​​တောင်​ ​ဆော့ရင်​ စစ်​တိုက်​​ကြေး​ဆော့တဲ့နိူင်​ငံ…….. ____________________________ မြန်​မာနိူင်​ငံစစ်​အင်​အားဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်​ ၃၂ ရှိတယ်​ဆို​ပေမယ့်​….ဦးသန်း​ရွှေလက်​ထက်​ ကမ္ဘာ့အဆင့်​ ၁အ​မေ​ရိကန်​က ​ရေငုတ်​သ​ဘောင်္ ရန်​ကုန်​နားကပ်​ပီး ဘာလို့မတိုက်​ရဲဘဲ လှည့်ုပြန်​သွားသလဲ……ဆို​​တော့ မြန်​မာနိူင်​ငံဘက်​မှာ….စစ်​အင်​အားအဆင့်​ ၂ နဲ့ ၃ …
စိုင်းစိုင်းတင်ခဲ့တဲ့ အလင်္ကာတစ်ပုဒ်…….ကဗျာတစ်ပုဒ်တင်ပြီး ချက်ချင်းပြန်ဖျက်သွားတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ အလင်္ကာတစ်ပုဒ်တင်ပြီး ၆ မိနစ်အတွင်း ဖျက်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွက်လူမှုကွန်ယက်မှာ လူသိများတဲ့ ကျောင်းသူလေး ဖြူဖြူထွေးက မနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်)ညက တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကြောင့် ထင်မှတ်မထားပဲ စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဖြူဖြူထွေးက အမျိုးမျိုးပြောဆိုလာကြတာကို တွေ့ရသည်။ ဒီပြောဆိုချက် ဟာသဖန်တီမှုများဟာ အနည်းငယ်ကျယ်ပြန်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ဘာမှ ပြန်မပြောခဲ့ပေ။သို့သော်လည်း ဒီနေ့ နေ့ခင်းမှာတော့ မန်လည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အလင်္ကာတစ်ပုဒ်ကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်အကောင့်ကနေ တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဟာ ချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီး ၆ မိနစ်အရောက်မှာတော့ ပြန်ဖျက်သွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါတယ်။တင်လေ့တင်ထမရှိတဲ့ သဘောမျိုးရှိတဲ့ အလင်္ကာဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းလည်း ပြန်ဖျက်သွားတာကြောင့် ဖြူဖြူထွေးနဲ့ …